Global Voices teny Malagasy » Amin’ny maha-Salvadoreana ahy, marika fiainana azo antoka i Etazonia ho ahy saingy rava izany ankehitriny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Aogositra 2020 4:52 GMT 1	 · Mpanoratra Amanda Obando Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: El Salvador, Etazonia, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Ny Tetezana - The Bridge
Asakanton'i Pamela Chavez, avy amin'ny sarimihetsika fohy nosoratany Caracol Cruzando , nahazoana alàlana.
Navoaka voalohany tao amin'ny Central American News  ity lahatsoratra ity.
Nifindra avy ao El Salvador nankany Washington DC ilay namako akaiky indrindra, 12 taona, izay niasa tao amin'ny Ambasady Amerikana ny rainy. Nifanena tsindraindray izahay rehefa lehibe ary nisy fotoana niresaka momba ny fifindramonina.
Amin'ny maha olom-pirenena amerikana azy, nihevitra ny fifindramonina ho fiarovam-pirenena izy, kanefa araka ny fomba fijeriko tamin'ny fahazazako taorian'ny vanim-potoanan'ny ady tany El Salvador, izay niharan'ny ady ankolaka nandritra ny Ady Mangatsiaka, noheverina hatrany ho olana zon'olombelona ny fifindramonina nankany Etazonia. Nahazo ny satan'ny fifindramonina, zom-pirenena, karatra maintso ary Sata Fiarovana Vonjimaika (TPS) ireo ao amin'ny fianakaviako.
Raha ny tena fijeriko azy, nampanantena fiainana azo antoka ny fifindramonina mankany Etazonia. Izany no notadiaviko rehefa tonga teto Etazonia aho tamin'ny taona 2019 nahazo visa ho an'ny mpianatra. Niova anefa nanomboka teo ny fomba fijeriko.
Nanomboka tamin'ny hakiviana izay nanitikitika ny saiko matetika noho izaho mpifindra monina any Etazonia ny nihavian'ny fanontaniako. Zavatra mangina izay tsy firesako firy. Nitombo io fahatsapana io noho ny fameperan'ny Amerikana ny dia tsy misy farany sy ny fanovana miovaova tamin'ny rafitry ny fifindramonina Amerikana ary ny fomba ifandraisan'ireo politika ireo amin'ireo sisintany voasakana any amin'ny firenena maro hafa noho ny COVID-19.
Any Etazonia, nanambara ny sampan-draharahan'ny Fampiharan-dalànan'ny fifindramonina sy ny fadintseranana ary avy eo nanaisotra ny lalàna milaza fa ny mpianatra vahiny dia tsy maintsy miala ny firenena  raha tsy manatrika kilasy. Tany am-piandohan'ity fahavaratra ity, nanome baiko ny birao hanaiky ny Fanemorana ny Fandraisana ny Fidiran'ny Ankizy (DACA)  ny Fitsarana Tampony. Nahemotra ny famoahana ny Karatra Maitso  ka nahatonga ireo mponina maharitra mety ho voaroaka. Tandindonin-doza amin'ny mety ho fahataperan'ny visa mialoha ny ahafahan'izy ireo mody ny mpizahatany raikitra any Etazonia noho ny fanakatonana ny sisintaniny. Mitovy amin'izany ary angamba mampiahiahy kokoa ny filazana fa mila vatsy famonjena 1,2 lavitrisa dolara amerikana  avy amin'ny governemanta ny Sampan-draharaha misahana ny Zom-pirenena sy ny Fifindramonina any Etazonia (USCIS) mba tsy handroahany mpiasa miisa 13 400. Tsy resahana intsony amin'izany ny karazana politika mikendry ny hanakanana ireo mpitsoa-ponenana sy ny fandroahana ireo olona tsy manana taratasy.
Nakaton'ny fireneko ao El Salvador ny seranam-piaramanidina hatramin'ny nanambarana ny baiko fihibohana ny volana Martsa. Sarotra ny toe-draharaha ho an'ireo tafahitsoka any Etazonia toa ahy. Sidina roa ihany  tamin'ny volana Jolay no natolotry ny Avianca, ilay oriasam-pitaterana an'habakabaka hany mikarakara sidina fiverenana. Mila miantso ny masoivoho , miandry amam-bolana, ary mividy tapakila raha misy toerana amin'ireo sidina vitsivitsy miala any Etazonia raha mba te ho tafiditra ao anaty lisitry ny governemanta  Salvadoreana ho an'ireo olom-pirenena izay mahazo alàlana hiditra ny sisintany mihidy ao El Salvador.
Hitako fa henjana ny toe-draharaha. Manery ny olona hiala ny firenena ny fitantanan'i Trump rehefa tsy nahavita nanatontosa ny dingana izy ireo, ary mandritra izany fotoana izany, maro ireo tafahitsoka any an-toerana tsy misy fahafaha-mamelon-tena noho ny lalàna rehetra mifehy ny fiainana andavan'andron'ireo mpifindra monina.
Ohatra, azoko lazaina fa sady ahafahako miaina milamina amin'ny maha-queer ahy no sady ahafahako mampiroborobo ny fianarako ihany koa ny visa ho an'ny mpianatra F1 azoko. Na izany aza, ho lany ny fe-potoana an'io visa io alohan'ny hisokafan'ny seranam-piaramanidina ao El Salvador. Nameno taratasy mba hanovako ny visa-ko ho visa ho an'ny mpitsidika aho rehefa avy nikaroka lalina sy nandinika ny pejin'ny tranonkala USCIS . Na dia voamarina aza fa afaka mijanona ara-dalàna aho mandritra ny fe-potoan'ny dingana dia tsy haharay filazana momba ny fangatahana nataoko aho raha tsy afaka 2 volana sy tapany ka hatramin'ny efa-bolana  ary mety mbola ho ela kokoa noho izany aza. Sady tsy afaka miasa na mianatra anefa amin'izany. Vokatr'izany, tsy maintsy mitady vola hanampiana ahy ny fianakaviako.
Tsy vaovao ireo toe-javatra ireo. Heverina matetika ho olana tsy mety voavaha ireo mpifindra monina, mampitaintaina ny fiainany. Raha ny hevitro, raha tsy namerina nijery ny fahazoan-dalana amin'ny fijanonan'ny mpianatra vahiny ao amin'ny firenena ny ICE izay vao tonga saina ny olom-pirenena amerikana maro fa mampijaly ny rafitry ny fifindramonina any Etazonia.
Na izany aza, na dia te-hiteny aza aho fa lozabe ny filalaovan'ny fitantanan'i Trump ny lalàna mifehy ny fifindramonina ao anatin'ny tontolon'ny valan'aretina dia efa nampijaly izany teo aloha. Ny tena zava-misy, azo ovaina ny lalànan'ny fifindramonina na ianao vao eo am-pahatongavna na efa monina ao amin'ny firenena na eo efa an-dalam-pahataperana ny visa-nao. Mametraka anay anaty ahiahy izany fahefana izany. Vao mainka nampiharihary ny zava-misy ny COVID-19.
Tsy vaovao amin'ny resaka ataonay, mpifindra monina, mangingina ity lohahevitra ity noho ny tahotra hiheverana anay ho tsy mahay mankasitraka. Miresaka izany izahay rehefa any amin'ny fiaraha-misakafo hariva, na miaraka amin'ny sampan-draharahan'ny oniversite iraisam-pirenena, ary indraindray miaraka amin'ireo namanay amerikana izay tsy mahatakatra ny resaka momba ny rafitry ny fifindramonina amerikana. Vao haingana, nanomboka niova ny adihevitra momba ireo resaka ireo izay nampiseho fa tsy tian'i Etazonia honina eto izahay ary nisy fiantraikany lalina tamin'ny fanapahan-kevitray sy ny fomba fisainanay izany.
Nahatsikaritra aho fa afaka manova mora foana ny fanantenanao, ny fahafahanao ary ny fiarovana anao ny rafitry ny fifindramonina any Etazonia na inona na inona sarangam-pifindramonina misy anao. Na dia efa fantatro aza ny fomba hiatrehako ny raritsaina vokatry ny famerana ny maha-mpifindra monina ahy dia mbola nanohina ahy ihany izany rehefa miatrika sakana vaovao aho toy ny hoe mandany volana maro tsy an'asa sady tsy misy tohana ara-bola satria miandry ny fahatongavan'ny taratasy aho. Mbola fadiranovana kokoa ny fahatsiarovan-tena ho irery ao anatin'io fisalasalana io – tsy hoe ny fahitana fotsiny fa nitsahatra ny fikasanao rehetra fa ny fahitanao ihany koa fa manana ny fahefana tanteraka ny governemanta izay nianteheranao ary mampihatra izany tsy ara-drariny.
Farany, toa safidy azo iainana tsara ny fiainana maharitra any avaratra, na dia tsy maharitra aza izany rehefa nandositra an'i El Salvador ireo fianakaviako mpitsoa-ponenana noho ny ady ary nanolotra fahafahana hianatra any Etazonia ny sekoliko tany El Salvador. Na izany aza tsy nanantena aho fa hanova ny fiainako ny fampiharan'i Trump ny fomba fijeriny. Raha ny fahitako azy, mifanamby tanteraka amin'ny fomba fijery efa hatry ny ela ny tsindry ataon'ny fitantanan'i Trump izay hiheverana an'i Etazonia ho toerana iray azo antoka sy ahitana tombontsoa. Manontany tena aho ankehitriny raha manana ny toerako eto amin'ity firenena ity. Tsy isalasalana fa mahatonga ahy hieritreritra fa tsy marina izany ny lalàna sy ny fitsipika ary ny fanovana tsy ara-drariny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/15/149279/
 tsy maintsy miala ny firenena: https://www.wsj.com/articles/white-house-weighs-scaling-back-rules-on-foreign-students-studying-online-11594746772
 Fanemorana ny Fandraisana ny Fidiran'ny Ankizy (DACA): https://www.npr.org/2020/07/17/892413311/federal-court-orders-trump-administration-to-accept-new-daca-applications
 Nahemotra ny famoahana ny Karatra Maitso: https://www.washingtonpost.com/opinions/how-the-trump-administration-is-turning-legal-immigrants-into-undocumented-ones/2020/07/09/15c1cbf6-c203-11ea-9fdd-b7ac6b051dc8_story.html
 mila vatsy famonjena 1,2 lavitrisa dolara amerikana: https://www.washingtonpost.com/immigration/immigration-agency-bailout-furlough/2020/06/30/93ee2a3a-ba45-11ea-86d5-3b9b3863273b_story.html
 Sidina roa ihany: https://www.avianca.com/us/en/about-us/news-center/avianca-news/flights-repatriation/
 lisitry ny governemanta: https://rree.gob.sv/gobierno-iniciara-repatriacion-de-salvadorenos-en-transito-afectados-por-la-pandemia-del-covid-19/
 2 volana sy tapany ka hatramin'ny efa-bolana: https://egov.uscis.gov/processing-times/